Egwuregwu na ngwa na ire ere maka obere oge | Esi m mac
Egwuregwu na ngwa ọdịnala na ere ere maka obere oge
José Alfocea | | Mmemme Mac
N'abalị nke El Gordo de Navidad raffle, ma nye atụmanya ole na ole nke ọtụtụ n'ime anyị nwere ihu ọma ga-amụmụ ọnụ ọchị na anyị, taa, ewetara m gị ọkwa ọzọ egwuregwu na ngwa ọdịnala maka Mac ndị na-ere ere maka obere oge, nke mere na ọ dịkarịa ala n'ụzọ ahụ, anyị nwere ike ịchekwa euro ole na ole iji nọrọ na ezumike ndị na-abịanụ.
Na-eso nke ndepụta ị ga-ahụ ma egwuregwu na ngwa, ha niile maka Mac, na ha niile nwere succulent ego. Ma cheta na ego ndị a ga-agwụ, na nke ahụ Naanị ihe m ga - emesi gị ike bụ na ha dị irè n'oge a na-ebipụta post a.t. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n’otu isiokwu, mee ọsọ ọsọ tupu onye nrụpụta wepụrụ onyinye ahụ.
1 Ngwa na ire ere maka Mac
1.1 Hichapụ oyiri ngwa ngwa
1.2 Okwu Okwu
1.3 Gbadoro anya - Obere ederede ederede na Editọ Markdown
1.4 ImageViewer: Video Player na Foto Ngosi onyonyo
1.5 Super Denoising - Mbelata Noise Foto
1.6 DJ Pro
2 Egwuregwu dị maka ire ere maka Mac
2.1 SimCity: Mbipụta zuru ezu
2.2 Call of duty Black Ops
2.3 Civilization V: Mgbasa Ozi Edition
Ngwa na ire ere maka Mac
Hichapụ oyiri ngwa ngwa
Chọta ma kpochapụ n'otu ọsọ ahụ faịlụ abụọ na-na-elu dị oké ọnụ ahịa ohere na gị Mac.
Ọnụ ego ya bụ euro 5,99 ma ugbu a, o nwere ego 90% ma ị nwere ike inweta ya naanị € 0,99.
Okwu Okwu zuru ezu ezigbo ederede ederede maka ndị kpebiri ide. Dakọtara na Marckdown, mbupụ n'ụdị dị iche iche dị ka PDF na HTML na ohere nke ibipụta ozugbo na Ọkara, WordPress, Tumblr, Blogger na Evernote, n'etiti ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Ọnụ ego ya bụ euro 11,99 ma ugbu a, o nwere ego 50% ma ị nwere ike inweta ya naanị € 5,99.
Gbadoro anya - Obere ederede ederede na Editọ Markdown
Chebara ya echiche es ọzọ ederede ederede yiri Okwu Byword, dakọtara na Markdown, ụdị ...
Ọnụ ego ya bụ euro 39,99 ma ugbu a, o nwere ego 25% ma ị nwere ike inweta ya naanị € 29,99.
ImageViewer: Video Player na Foto Ngosi onyonyo
«ImageViewer bụ ihe nkiri foto dị ike na ọkpụkpọ vidiyo maka ilele onyonyo na kpọọ vidiyo na faịlụ ọdịyo na-enweghị nkụda mmụọ. "
Ọnụ ego ya bụ euro 4,99 ma ugbu a, o nwere ego 80% ma ị nwere ike inweta ya naanị € 0,99.
Super Denoising - Mbelata Noise Foto
Ọ bụ nchịkọta akụkọ ihe oyiyi zuru oke belata mkpọtụ na ọkụ site na ọka ọka ma ọ bụ foto edoghị ederedes.
Djay Pro bụ ngwaọrụ zuru ezu gosipụtara na "interface ọhụụ na nke pụrụ iche dabere na ọkaibe mwekota na iTunes na Spotify, na-enye gị ohere ịbanye na nde egwu egwu ozugbo.
Ọnụ ego ya bụ euro 49,99 ma ugbu a, o nwere ego 20% ma ị nwere ike inweta ya naanị € 39,99.
Egwuregwu dị maka ire ere maka Mac
SimCity: Mbipụta zuru ezu
Mepụta obodo nke nrọ gị ma mee mkpebi ndị ga-agbanwe obodo gị na ndị Sims bi na ya. Gbado anya na ụlọ ọrụ ma ọ bụ oriri na akụ na ụba gị ga-eto nke ukwuu, mana na-efu ahụike Sims ka mmetọ na-abawanye. Mejuputa teknụzụ na-acha akwụkwọ ndụ iji melite ndụ Sims ka ị na-eche ụtụ isi na enweghị ọrụ na-arị elu.
Ọnụ ego ya bụ euro 29,99 ma ugbu a, o nwere ego 66% ma ị nwere ike inweta ya naanị € 9,99.
"Oku ọrụ: Black Ops maka Mac na-ewe ndị na-egwu egwu na esemokwu gburugburu ụwa dị ka ndị Elite Black Ops na-alụ agha nzuzo na arụmọrụ n'okpuru mkpuchi nke Agha Nzuzo". Mbipụta a gụnyere maapụ egwuregwu ọhụụ anọ ọhụụ na a «New chilling Zombie ahụmahụ».
Ọnụ ego ya bụ euro 39,99 ma ugbu a, o nwere ego 50% ma ị nwere ike inweta ya naanị € 19,99.
Civilization V: Mgbasa Ozi Edition
“Na-achị ụwa site na ịtọlite ​​ma na-eduga mmepeanya, site na mmalite nke oge ruo n'ọgbọ: kwupụta agha, guzobe mmekọrịta mmekọrịta mba ọzọ, chọpụta teknụzụ ọhụụ, na-asọ mpi megide ụfọdụ ndị isi kachasị ukwuu na akụkọ ihe mere eme ma wuo alaeze kachasị ike nke ụwa. amarala. "
Ọnụ ego ya bụ euro 9,99 ma ugbu a, o nwere ego 60% ma ị nwere ike inweta ya naanị € 3,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Egwuregwu na ngwa ọdịnala na ere ere maka obere oge
LG UltraFine 5k nwere ike ịrụ ọrụ na 4k mkpebi na Macs ndị okenye
Jiri uru ego Apple, rite uru ruo Machị 31, 2017